नेयमार Archives - Lokpati.com
Tag - नेयमार
बार्सिलोनाले जनवरीमा नेयमारलाई क्लवमा नभित्र्याउने पक्का
काठमाडौं, २१ भदौ। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले जनवरी ट्रान्सफरमा पेरिस सेन्ट जर्मनका फर्वार्ड नेयमारलाई क्लवमा नभित्र्याउने भएको छ। क्लवका अध्यक्ष जसेप मारिया बार्टोमेउले जनवरीमा नेयमारसँग सम्झौता हुने सम्भावना नरहेको...
नेयमारको भविष्य अन्यौलमा !
एजेन्सी। सोमबार अर्थात् सेप्टेम्बर २ मा युरोपियन फुटबलको सरुवा बजार सकिँदैछ। स्टार खेलाडी नेयमारको सरुवा भने अझै अन्यौलमा छ। विश्व फुटबलका प्रशंसकदेखि खेलाडीहरुसम्मको चाँसोको विषय बनेका नेयमारको सरुवा भने अझै अन्यौलमा...
कारवाहीमा परे नेयमार
बीबीसी । पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)ले स्ट्राइकर नेयमारलाई कारवाही गर्ने भएको छ। सोमबारदेखि पीएसजीले प्रि-सिजनको अभ्यास थालेको थियो।
तर, चर्चित खेलाडी नेयमार भने उपस्थित हुन सकेनन्। प्रि-सिजनको पहिलो दिन नै अभ्यासमा उपस्थित...
को हुन् नेयमार ? फुटबलर नेयमारको संक्षिप्त जीवनी
उनले थुपै पुरस्कारहरु जिते जस्तै कैम्पैओनाटो, पौलिस्टा, कोपा डो ब्राजिल कोपा लिवर्टाडोरस, कोपा सुदामेरिकाना, ला लीगा, कोपा डेलरे, सुपर कोपा डे एस्पना, थुइएफए चैपियस लिग, यूईएफए सुपर कप, फीफा क्लव वल्र्ड कप आदि मूख्य छन्।
नेयमारलाई कप्तान बनाए ब्राजिल फेरि हार्छ : इडमिलसन
एजेन्सी । नेयमारका पछिल्ला क्रियाकलापका कारण उनी विवादमा परेका छन्। उनीमाथि आफ्नो जिम्मेवारी समेत पूरा नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
पूर्व बार्सिलोनाका डिफेन्डर इडमिलसनले कोपा अमेरिका कपमा ब्राजिलको कप्तानको जिम्मेवारी...
नेयमारमाथि आठ खेल खेल्न प्रतिबन्ध
एजेन्सी। पीएसजीका खेलाडी नेयमारलाई आठ खेलसम्मको प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ। नेयमारलाई फ्रान्सेली फुटबल फेडेरेशनले आठ खेलसम्मको प्रतिबन्ध गर्नसक्ने भएको छ।
फ्रेन्च कप हारेपछि आफ्नै समर्थकलाई नेयमारले मुक्का प्रहार गरेको...
प्रिमियर लिगबारे के भन्छन् नेयमार ?
काठमाडौं, २१ मंसिर । पिएसजी तथा ब्राजिलियन स्टार नेयमारले प्रिमियर लिगबारे प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेयमारले आफूले कुनै दिन प्रिमियर लिगबाट खेल्ने चाहना बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रिमियर लिग विश्वकै ठुलो प्रतिस्पर्धा हो...